म्याकमा IPSW फाईल कसरी खोल्ने आईफोन समाचार
म्याकमा IPSW फाईल कसरी खोल्ने
आईफोन, आईपड वा आईप्याड अपडेट वा पुनर्स्थापना धेरै सरल छ, विशेष गरी यदि हामीले यसलाई पहिले नै कम्तिमा एक पटक गरिसकेका छौं। हामी उपकरणबाट (सेटि / / सामान्य / रिसेट / सामग्री र सेटिंग्स मेट्नुहोस्। तर सावधान रहनुहोस्, जेलब्रेक राख्न यो मन नपार्नुहोस्) वा आईट्यून्सबाट मात्र "आईफोन रिस्टोर" मा क्लिक गरेर। तर यदि हामी संस्करण स्थापना गर्न चाहान्छौं अझै पनी हस्ताक्षर गरिएको छ, त्यहाँ तेस्रो विकल्प छ, जुन डाउनलोड गर्नु हो .ipsw फाईल र म्यानुअली स्थापना गर्नुहोस्.
प्रक्रिया वास्तवमै सरल छ, तर त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यसलाई थाँहा पाउँदैनन् र त्यसैले तपाईंले हामीलाई आफ्नो जिज्ञासाहरूमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। क्वेरी भनेको यो प्रश्न हो कि यो लेख यसको शीर्षकको रूपमा छ: ¿कसरी खोल्ने एक .ipsw फाईल म्याकमा छ? अर्को हामी तपाइँलाई केवल यो कसरी म्याकमा खोल्ने भन्ने कुरा बताउँदैन, तर विन्डोज कम्प्युटरहरूमा पनि।
पहिलो, अवश्य हुनेछ, फाईल पाउनुहोस् हाम्रो उपकरणको लागि विस्तार .ipsw (आईफोन सफ्टवेयर) को साथ। सबै भन्दा राम्रो पृष्ठ र मैले सिफारिस गरेको एक याद गर्न सजिलो छ: getios.com। Getios.com मा एकचोटि, हामी तीन ड्रप-डाउन बक्सहरू देख्नेछौं जुन हामी फर्मवेयरबाट कुन प्रकारको उपकरण डाउनलोड गर्न चाहन्छौं, कुन मोडेल र आईओएसको कुन संस्करण, तपाइँले निम्न स्क्रिनशटमा देख्न सक्नुहुनेछ भनेर संकेत गर्नेछौं।
एकचोटि चयन भएपछि, हामी केवल पाठ «डाउनलोड below को तल रातो एरो आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। Getios.com मा तिनीहरू प्राय: अन्जीप गरिएको फाईलहरू डाउनलोड गर्दछन्, तर अनलाइन यो सम्भव छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई .zip वा .dmg भित्र फेला पार्नुहुनेछ। यद्यपि यो मूर्ख देखिन्छ, यो छ फाइल अनजिप गर्न महत्वपूर्ण छ वा, तार्किक रूपमा, हामी .ipsw फाईल पहुँच गर्न सक्षम हुनेछैनौं।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, हामीले गर्नुपर्नेछ ITunes को साथ फाइल खोल्नुहोस्। यो गर्नका लागि हामीले केवल गर्नुपर्नेछ ALT कुञ्जी थिच्नुहोस् विन्डोजमा म्याक वा सिफ्टमा र "आईस्टोर रिस्टोर" वा "अपडेट" क्लिक गर्नुहोस्, हामी के गर्न चाहन्छौं त्यसमा निर्भर गर्दै। क्लिक गर्नु अघि कुञ्जी थिचेर, हामी तपाईंलाई के भनिरहेका छौं विन्डो खोल्नको लागि जहाँ हामी .ipsw फाइललाई म्यानुअल रूपमा खोजी गर्नेछौं। एकचोटि हामीले गर्छौं, आइट्युनहरू एप्पलको सर्भरहरूमा जडान हुनेछ, यसको प्रमाणिकरणहरू गर्नेछ, र स्थापना सुरु गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » म्याकमा IPSW फाईल कसरी खोल्ने
ट्विस्ट आईफोनमा फोटो रिचिंगको लागि माइक्रोसफ्टको नयाँ अनुप्रयोग हो
iFixit नयाँ Magic माउस, जादुई ट्र्याकप्याड र Magic कीबोर्ड gutters